Nagu saabsan - Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd.
Jiangxi Checheng Trading Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2016, waxaan nahay soo saare xirfadle ah boorsooyinka baabuurta iyo alaabada daryeelka gawaarida, isku xirka horumarka iyo wax soo saarka, iibka, iyo wada ganacsiga.
Ka dib markii in ka badan 4+ sano oo horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo, waxyaabaha our ayaa loo dhoofiyey Europe, America, Koonfur-bari Aasiya, Afrika, Bariga Dhexe, iwm Waxay aad u qiimeeyeen by macaamiisha iyo tartamaya isla line ganacsi.
JIANGXI CHECHENG wuxuu ku takhasusay R&D, wax soosaarka, iyo suuq geynta mashiinada wax qabad ee wax qabadka ee labalaabka ah, makiinadaha gawaarida wareega, iyo makiinada mashiinka yar. Waxaan si madax banaan u soo saarey oo soo saarey aalado kala duwan oo nadiifiya, sida NEW Super Palm Series DA polishers, Best Sell X-Bot series DA polishers, DF tax DA DA, polishers Rotary, and mini polishers. Alaabtayada waxaa la helay shahaadooyinka CE iyo RoHS.
Sida soo saaraha ah, waxaan leenahay warshad noo gaar ah oo ku taal Yongkang, Zhejiang halkaas oo caan ku ah warshadaha mashiinka-dhiska, dhammaan R&D iyo wax soo saarka ayaa halkan ka dhaca. Agaasimaha Farsamada, sidoo kale saamilaha Checheng, wuxuu leeyahay 10 + sano oo khibrad ah R&D iyo soo saarida baalayaasha baabuurta. Iyada oo tiknoolajiyaddiisa ballaaran iyo fahamka wax soo saarka iyo suuqyada, mashiinnadayada si wanaagsan ayaa ay u soo dhoweeyeen macaamiisha oo ay u aqoonsan yihiin suuqyadu dhowaan.
Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo iskaashatooyin ah si aan ula kulanno shuruudahaaga. Kooxdayada waxaa ka mid ah hoggaamiyeyaal aragti fog leh, koox khibrad u leh R&D iyo farsamo yaqaanno, koox iibin karti leh, shaqaale xirfad leh, iyo shaqaale ilaaliya tayada.
Waxaan diyaar u nahay inaan ku tusno kala duwanaanshaheena wax soo saar oo aan kugu hagno xulashada wax soo saarka ku habboon baahidaada.
1. Macaamiisha calaamadaha, waxaan ku siin karnaa naqshadeynta mashiinka, R & D, iyo furitaanka caaryada, taageero farsamo oo xoog leh, iyo nidaam adeeg oo dhameystiran.
2.Jumladleyda, tafaariiqleyda iyo macaamiisha iskood u shaqeysta, waxaan heysanaa tiro ku filan, jawaab deg deg ah, dhoofinta dhoofinta, bixinta degdega ah, ilaalinta iibka kadib, ma lahan lacag iyo cadaadiska alaabada.
Checheng hubaal waxay bixin kartaa adeegyo xirfad iyo heer-koowaad ah sida ku xusan codsiyada macaamiisha.
SOO SAARKA & SHAABADA
Ujeeddadeenu waa inaanu siino alaabooyinka ugu hal abuurka badan iyo adeegyada ugu fiican qiimaha ugu macquulsan. Waxaan hwaxay la shaqeysaa macaamiil dheeri ah horumarka labada dhinac iyo faa'iidooyinka. Iibsadayaasha waa la soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto!